Soomaalidii salaada loo diiday oo xisbiyaddu ka doodayaan | WWW.SOMALILAND.NO
Soomaalidii salaada loo diiday oo xisbiyaddu ka doodayaan
Lena Jensen oo baarlamaanka Dalkan Norway u fadhida xisbiga SV ayaa waxay sheegtay in aanay ku farxin labadda qof ee soomaalida ah ee markii shaqadda in ay ku tukadaan loo diiday iskaga tagay.
Waxaa wax lala yaabo in xaaladdahan oo kale ay Norway ka jiraan xilligan aynu ku jirno ayay tidhi Jensen.
Dhinaca kale afhayeenka arimaha ajaanibka u qaabilsan xisbiga Frp, ninka magaciisa la yidhaa Per-Willy Amundsen ayaa sheegay in ay caadi tahay in qofka shaqo-bixiyaha ahi uu shaqaalihiisa xad u sameeyo. Waa in faraha looga qaado goaamadda uu gaadho shaqo-bixiyuhu ayuu yidhi Amundsen.
Waxa kale oo uu intaa ku daray in Norway ay jiraan xeerar iyo sharciyo aan qornayn oo ay tahay in uu qofku marka uu shaqaalaha yahay raaco. Salaad goobta shaqadda lagu tugadaa maaha wax Norway ka caadi ah ayuu ku sii daray.
Jensen ayaa waxaa ay sheegtay in xisbiga Frp uu gacmaha kula jiro arin aan nadiif ahayn. Taas oo ay ula jeedo in uu cunsiriyadda kolba ka soo aglaabanayo.
Waxay tidhi waxay Frp doonayaan in ay dadka u kala soocaan ”INAGA” iyo “IYAGGA”. Taasina aanay ahayn xaqiiqadda hadda jirta. Waayo dadku waxay ka simanyihiin ayaa ka badan waxa ay ku kala duwanyihiin ayay raacisey Lena Jensen.
Amundsen laakiin wuxuu ku jawaabay in aanay xisbiga SV waxa laga hadlayo si fiican weli u fahmin.
Wuxuu yidhi arintani waxay ku saabsantahay in aanu doonayno in mushtamaca Norway oo dhan isku si loola dhaqmo oo aan tixgelino gaar gaar ah loo kala samayn. Marka dad meelo kale ka yimidna ay dalkan yimaadaan ay la qabsadaan mushtamaca Norway sida uu u dhaqanyahay. Waayo mushtamaca Norway maaha wax caadi ah in qofku shan goor inta uu baxo oo uu shaqadiisa ka tago in uu soo tugado ayuu yidhi Amundsen.
« -Waa in aynu burburinaa inta ay socod baradka yihiin Ogeysiin Jaaliyadda Oslo »